Mhosva pakati peSCO neIBM yekutyora kodzero mukodhi yeUNIX / Linux iri mukugadzirisa kusarudzika | Linux Vakapindwa muropa
Pakupera kwaKurume wegore rino, takagovana pano pablog nhau dzekudaidzira kwandakaita Xinuos vanhu vakatora matanho epamutemo kurwisa IBM neRed Hat uye ndiXinuos uya inoti IBM yakateedzera zvisiri pamutemo kodhi yeXinuos yeayo server inoshandisa masystem uye yakarangana neRed Hat kupatsanura zvisiri pamutemo musika.
Izvi zvese zvakatanga muna 1995 nekutengesa by kubva kuNovell kubva kuUnix kodhi kuenda kukambani yeSCO (SCO, mutengesi weUNIX kune x86 processor). Kutengesa uku kwakagadzira dudziro mbiri pakati pevatori vechikamu, sekutenda kwaNovell kuti yakangoendesa kodhi chete, kwete kodzero dzepfuma, iyo SCO inoti yatenga zvese zviri zviviri.
Muna 1998, IBM, Santa Cruz Operation, nevamwe vakauya pamwechete kuti vagadzire Project Monterey., nechinangwa chekugadzira vhezheni yeUNIX inomhanya pamapuratifomu ehurdware (chimwe chinhu icho nharaunda yeLinux yakanga yatanga kuita futi)
Muna 2001, IBM yakafunga kuti Linux yaive ramangwana uye yakasiya Project Monterey, Kunyangwe kudhonza vamwe vevatori vechikamu veMonterey Project mukumuka kwayo. Panguva iyoyo, Big Blue yakanga yagadzira yero yekuyedza yeiyo yayo UNIX-senge AIX inoshanda sisitimu yaishandisa SCO kodhi.
Asi kana achinge asiya chirongwa ichi, IBM yakaendesa imwe yeimba yayo yehungwaru kuLinux. SCO yakaramba mipiro iyi nekuti yaitenda kuti IBM yakanga yaisa zvinhu zvayo kuLinux yakavhurwa sosi kodhi.
Uye zvakare, munaKurume 6, 2003, Caldera Systems, yakatumidzwa zita rekuti SCO, yakamhan'arira IBM kutyora chibvumirano chavo cheMonterey chekubata chirongwa chine chekuita nekubatana kweiyo Unix sisitimu inoshanda. Mumhan'ari akanyatso kupomera Big Blue kuti akaburitsa pachena kodhi yekodhi yeUnix uye nzira dzekupa mari kuLinux uye nekuvandudza AIX, iyo IBM's vhezheni yeUnix pakutanga kutora madhora bhiriyoni mukukuvadza, kuda kwake kwakakwira nekukurumidza nemwedzi mitatu kusvika $ 1 bhiriyoni.
Yakarwiswa neIBM muna Nyamavhuvhu 2003 muUtah federal court uye ichikonzera kuchema kusati kwamboitika muhunyanzvi hwetekinoroji pasi rose (kubva paFree Software Foundation kusvika kuNovell, kusanganisira vashandi vayo), SCO yakakurumidza kuzviwana iri mune yakashata mamiriro.
Musi waAugust 10, 2007, Mutongi Kimball akapa mutongo akafunga: inoratidza kuti Novell ndiye muridzi we copyright ku Unix uye UnixWare. Yatarisana nekukundikana kwakadaro uye ichioneka yakatsamwa, kambani yaive munjodzi. Kubuda kwaro kwakange kwaderera kubva pamadhora mazana maviri nemakumi mashanu emadhora kusvika pamamirioni gumi nemashanu pagore nekuda kwemakwikwi matsva kubva kuLinux.
Zvino, musi waAugust 26, 2021, mukukumbira kwechibvumirano kubva kuUnited States Bankruptcy Court yeDunhu reDelaware inoratidza kuti mapato "abvumirana kugadzirisa kusawirirana kwese kusanganisira kuburikidza nemubhadharo kumubati (…) we $ 14,250,000 »mukati memazuva mashanu kubva pazuva rekushanda kwechibvumirano chekugadzirisa.
Zviripachena, kana chikumbiro chikatambirwa nemapato ese, chibvumirano ichi chaizopedza iyo yaimbove mhosva yeSCO neBM. Mumazuva mashanu, IBM ichafanirwa kubhadhara iyo $ 14,25 mamirioni nekuchinjisa kumutariri anobata kubhuroka kweSCO, iyo yakapihwa zita rekuti TSG Boka. Kune vekupedzisira, ichi chikumbiro chinoitwa nenzira inonzwisisika, tichifunga zvakanakisa zvevakweretesi uye chinofanira kutenderwa.
Asi izvi hazvingagumi pano, sezvo kunetsana uku kunogona kutungamirwa nechimwe chinhu. Muchokwadi, kunyangwe hazvo SCO yakabhuroka, huchenjeri hwayo hwakaramba huchirarama pasi pevaridzi vatsva. IBM yakaramba ichirwira uye masangano akagara nhaka yeSCO pfuma yekuenderera mberi achiedza kuyedza makona matsva, kutsvaga matsva matsva emari.
Xinuos, iyo yakatora zvinhu zveSCO makore gumi apfuura, yakamukira IBM. Huru Bhuruu inopomedzerwa zvakare, panguva ino naXinuos, yekukopa zvisiri pamutemo kodhi yesoftware iyo iyo yekupedzisira yakatenga kubva kuSCO kuti ishandise mune yayo sisitimu.
Xinuos, akamhan'ara pamberi pegore rino. Xinuos yakaumbwa yakakomberedza nhumbi dzeSCO Boka makore gumi apfuura pazita rekuti UnXis, uye panguva iyoyo, mutsivi weSCO akange asingafarire kuenderera nharo yekupedzisira yekumhanyidzana pamusoro peLinux.
Zvinodiwa inopomera kuti IBM yaisanganisira isina kutaurwa kodhi yekambani yeUnixWare uye OpenServer kodhi pane IBM yega AIX inoshanda sisitimu. Izvo zvakare zvinomiririra kuti IBM neRed Hat zvakananga vakarangana kupatsanura musika wese. yeUnix-senge anoshanda masystem kuita makuru mabhizimusi mikana eBM, ichisiya Xinuos murima.
Mhosva yeXinuos inotiwo IBM yakatsausa varairidzi nekutaura mumishumo yayo yegore rose kubva muna2008 kuti ine kodzero dzekopiriti muUnix neUnixWare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Mhosva iri pakati peSCO neIBM yekutyora kodzero mukodhi yeUNIX / Linux iri mukugadzirisa kusarura
LibreOffice 7.1.6 yasvika ichigadzirisa huwandu hwe44 bugs